कोरोनाको जोखिममा सुदूरपश्चिम : सरकारको आश छाडौं, सतर्क बनौं
केशवी जोशी बिहीबार, चैत २७, २०७६, १२:१४
कोरोना महामारीसँग विश्व जुधिरहेको छ। विश्वमा सबल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्र चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका युरोपेली मुलुकसमेत यो माहामारीबाट बच्न ठूलो संघर्षमा छन्। छिमेकी राष्ट्र भारतमा यसले ठूलो रुप लिँदै गएको छ। नेपाल पनि कोरोनाको युद्धमैदानमा नै छ। यो अवस्थामा सरकारबाट आम नागरिकले गर्ने अपेक्षाहरूको सूची र सूचक बढेर जान्छ। सरकारका कमीकमजोरी केलाउनुका साथै नागरिकले पनि केकस्ता काममा सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। नागरिक सबैभन्दा बढी सतर्क भइदिए यो महामारीसँग जुध्ने बलियो अस्त्र हुन सक्छ।
कामका लागि विदेश गएका नेपाली स्वदेश फर्किएसँगै देशमा संक्रमण फैलन सक्ने विषयले त्रसित बनाएको छ। विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश क्षेत्रमा पछिल्लो समय भारतबाट ठूलो संख्याका नेपालीहरू आएको र भारतका धेरै स्थानमा हटस्पट समेत मानिएकाले सुदूरपश्चिममा यसको संक्रमित भित्रिएको हुन सक्ने भएकाले हाइ अलर्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। तर पहाडी गाउँहरुमा त्यसको असर अझै महसुस हुनसकेको छैन्। सहर बजारबाट मात्र नभएर भारत, खाडीमुलुक लगाएत विभिन्न कोभिड-१९ संक्रमण भएका देशहरुबाट फर्किएका व्यक्तिहरुको अन्तिम गन्तव्य भनेको गाउँ नै हो। अझ सरकारको लकडाउनको निर्णयसँगै देशका विभिन्न शहरमा रहेको ठूलो जमात आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न नसकिने महसुस गरी आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ पुगेको छ। संक्रमणको जोखिम गाउँमा बढी छ भन्न गाह्रो छैन।
भारतबाट आएका दुई जना र दुबइबाट आएका एक जनामा कोभिड-१९ देखिएको पुष्टि भइसकेको छ। यसलाई सामान्य रुपमा हेरिएको थियो। तर, दुबइबाट आएका व्यक्तिको परिवारको सदस्यमा कोभिड १९ देखिएसँगै स्थिति चिन्ताजनक बनेको छ। पहिलो चरणमा रहेको कोभिड-१९ दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेपछि चिन्ताको पारो पनि माथि चढेको छ। समयमा नै सजग हुन सकिएन भने सुदूरपश्चिम कोभिड-१९ को इपिसेन्टर बन्ने पक्का छ।
पछिल्लो समयमा खुला सीमा नाकाबाट नेपाल भित्रिएका २ लाख नेपालीमध्ये करिब १ लाख ५० हजार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै भित्रिएको अनुमान गरिएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशसंग जोडिएका सीमा नाका बन्द गरे पनि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको सिमानाबाट माहाकाली नदीमा डुङ्गाबाट र पौडी खेलेर दैनिक ६० भन्दा बढी नेपाली दिनहुँ लुकीछिपी नेपाल भित्रिएका समाचार आइरहेका छन्। स्थानीय सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त ठाउँमा पठाउने निर्णय गरे पनि कार्यन्वयन फितलो छ। सरकारले दोस्रो मुलुकबाट भित्रिन लगाएको रोक र त्यसका लागि गरेको तयारीले पुग्ने देखिँदैन। खुला सीमाबाट अनधिकृत रुपमा कति आए र कहाँ गए भन्ने एकिन तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। त्यसरी आउने नेपालीका लागि के गर्ने? कसरी पत्ता लगाउने? सरकारको तयारी शून्यकै वरिपरि छ।
अन्धविश्वासमा बढी छ। गाउँघरमा सामाजिक कार्य र ब्रतबन्ध, पूजापाठलगायतका जमघट रोकिएका छैनन्।
सुदूरपश्चिम सरकारमा होइन, समग्र प्रदेशबासीले पनि कोभिड १९ पूर्वतयारीबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ। बेलैमा उपयुक्त वातावरण बनाउन सकेनौं भने ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने निश्चित छ। अहिलेको अवस्था भनेको परीक्षणको हो। यसको दायरा तत्काल विस्तार नगरे रोगको संक्रमण कुन स्तरमा छ भन्ने पत्ता लागउन सकिन्न। यस काममा सरकारलाई दबाब दिने र आफू सजग हुने कर्तव्य सबै नागरिकको हो। तीनै तहका सरकारले समन्वय बढाउनुको विकल्प छैन। परिवेश र अवस्थाबारे सरकारदेखि नागरिकसम्मले अध्ययन गर्न जरुरी छ।
सहर सूचनाको पहुँचमा छ। मानिसमा सजगता बढी छ। घरबाट बाहिर कमै निस्कन्छन्। साबुनपानी र स्थानिटाइजरको प्रयोग बढी छ। गाउँघरमा सूचनाको अभाव छ। अधिकांश मानिस सही सूचना प्राप्त गर्न अरुमा भरपर्नु पर्ने अवस्था छ। संचारमाध्यमको पहुँच कम छ। अन्धविश्वासमा बढी छ। गाउँघरमा सामाजिक कार्य र ब्रतबन्ध, पूजापाठ लगायतका जमघट रोकिएका छैनन्।
क्वारेन्टाइनमा राखिएका आफन्त घर लैजानका लागि बैतडीमा एक समूहले स्वास्थ्यकर्मीलाई कुट्ने अवस्था आयो। यो घटनाले त्यहाँका जनसमुदायको चेतनाको स्तर आँकलन गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमको महान् चाड बिशुपर्व अर्थात् नयाँ वर्ष आउन अब केही दिन मात्र बाँकी छ। त्यस समयमा लाग्ने मेला र धार्मिक कार्यहरुमा सहभागी नहुन कडा आदेशको आवश्यकता छ।
तपाईं हामी जो जहाँ छौं, त्यहीँबाट आफ्ना परिवारका सदस्यलाई कोभिड-१९ बारेमा बुझाउने कोसिस गरौं। समाजमा भेला हुने वा जम्मा हुने काम बन्द गर्न भनौं। साबुनपानीले हात धुन ध्यान दिन आग्रह गरौं। कोही व्यक्ति भारत वा अन्य देशबाट आएको थाहाँ पाए तुरन्त प्रहरीलाई खबर गरौं। गाउँघरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनको आश नगरौं।
सुदूरपश्चिम (सुप)का पहाडी जिल्लामा सूचना पाएपनि न त हात धुन साबुन पर्याप्त छ, न साबुनले हात धुनका लागि समय नै। के सबैले पटकपटक साबुनपानीले हात धुन सक्लान्? अनि के तिनीहरु साँच्चै स्यानिटराइजर पाउलान्? यी विषय सोचनीय छन्। कति चोटी घरपालुवा जनावरकोपछि लाग्छन्, गनि साध्य हुन्न। अनि के त्यति नै समय उनीहरु हातले कतै न छोई बस्न सक्लान्?
गाउँमा एकान्तबासमा बसेको सुनिएको छैन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको महत्व बुझाउन सकिएको छैन।
अहिले गहुँबाली भित्र्याउने समय छ। तराइ जस्तो पहाडी जिल्लामा थ्रेसरको प्रयोग छैन। थ्रेसरको सट्टामा समूहमा काम गरिरहेका छन्। भारतीय नाकाबाट नेपाल भित्रिएकामध्ये अधिकांश पाहाडी जिल्लाका मानिस छन्। के तिनीहरुका परिवार समूहमा काम नगरेर बस्लान्? एकान्तबासमा कति दिन बस्लान्?
गाउँमा एकान्तबासमा बसेको सुनिएको छैन। आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको महत्व बुझाउन सकिएको छैन। बुझेकाले पालना गरेका छैनन्। त्यसका लागि सूचना कसरी प्रवाह गर्ने? स्थानीय सञ्चारमाध्यको भूमिका कस्तो हुने? सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थासँग कसरी काम गर्ने जस्ता विषयहरुमा समेत ध्यान जान जरुरी छ।
पूर्वाधार र उपचार
कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला छन्। उपचारका लागि समेत सहज वातावरण छैन। सामान्य जरो थाहा पाउन स्वाथ्यचौकी पुग्न अझै पनि एक दिन लाग्छ। पहाडी गाउँमा कोभिड-१९ को संक्रमणले छोयो भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी उपचारस्थलसम्म कसरी ल्याउने भनेर तयारी छैन। धेरै ठाउँमा बिरामीलाई बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसरी बोकेर ल्याउने व्यक्तिलाई उक्त संक्रमणबाट कसरी बचाउने जस्ता समस्याबारेमा अहिले नै बहस हुनु जरुरी छ।
धेरै गाउँपालिकाले अस्थायी स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गरेको पनि सुनिएको छ, तर त्यतिले मात्र पर्याप्त हुँदैन। कोभिड-१९ को प्रकोपमा पहाडी जिल्ला परे ती ठाउँबाट बिरामीलाई एम्बुलेन्ससम्म ल्याउन सकिने अवस्थासमेत सोचनीय छ। एकातिर सबै गाउँ र घरमा एम्बुलेन्स जाने बाटो नै छैन भने अर्कातिर स्थानीय सरकारसँग एम्बुलेन्सकै अभाव छ। कति स्वास्थ्यचौकीमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी सहजीकरण गर्ने स्थानीय सरकारले तत्काल कदम चालेको खै?
नाम मात्रको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर निस्कनु कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएको प्रमाणपत्र त होइन होला, आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनको तयारी के छ?
पहाडी गाउँमा जेष्ठ नागरिकको संख्या बढी छ। आफ्नो विचारमा दृढ हुने यो उमेर समूहका धेरै मानिससँग पछिल्लो समय बाहिरबाट आएका मानिसको जमघट हुन घरबाहिर जानु पर्दैन। वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि घर छोडेकाहरू घर फर्किए भने ढुक्क हुने अवस्था छैन। त्यसमध्ये ६५ वर्षभन्दामाथि र कुनै रोग (दम, वाथ, मधुमेह, मुटु)बाट पीडितलाई कोभिड १९ को संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ। यो समूहको सुरक्षाका लागि सरकारले के गरिरहेको छ? सरकारले नगरे पनि जनताले सचेत हुने बेला आएको छ।
दार्चुलाको सीमा नाका धार्चुलामा १४ दिनका लागि क्वारेन्टिनमा राखिएका १ हजार ६ सय नेपालीको अवस्था चिन्ताजनक छ। उनीहरुलाई राखिएको क्वारेन्टाइनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेका सामान्य मापदण्ड पनि अपनाइएको छैन। खाँदिएर राखिएका तस्बिर बाहिर आएका छन्। यसले चिन्ता थपेको छ।
हुन त त्यति धेरै संख्यामा रहेका नेपालीलाई व्यवस्थित गर्न सहज पनि होइन तर, कमजोरी ढाकछोप गर्नु अथवा टुलुटुलु हेरेर बस्नु क्षम्य हुँदैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश र संघीय सरकारको ठूलो कमजोरी भइसक्यो। अब तिनको व्यवस्थापनमा राज्य के गर्दैछ भन्ने जानकारी पाउन मुस्किल छैन, किनभने राज्यले केही पनि गरेको छैन।
सीमापारि अस्तव्यस्त भएर खाँदिएर बसेका एक जनामा संक्रमण देखियो भने त्यसपछिको चुनौती व्यवस्थापन झन् विकराल छ। नाम मात्रको क्वारेन्टाइनमा १४ दिन बसेर निस्कनु कोभिड-१९ को संक्रमणबाट मुक्त भएको प्रमाणपत्र त होइन होला, आइसोलेसन वा क्वारेन्टाइनको तयारी के छ?
धनगढीमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भएको संक्रमण १९ दिनपछि मात्र पुष्टि भएको छ। १४ दिनले नपुग्ने यसै पनि प्रमाणित भयो। फेरि त्यता बसाईलाई कसरी क्वारेन्टाइन भन्ने? सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। तर सरकार जति गम्भीर हुन पर्ने हो त्यति गम्भीर छैन। त्यसैले सबै नागरिक स्वतःस्फुर्त रूपमा सचेत भई आपसी सहयोग बिना यो महामारीसँग जुध्ने शक्ति कमजोर हुन्छ। नागरिक सचेत भए यो महामारी परास्त हुन्छ। प्रार्थना गरौं, हामी सबै सुरक्षित रहन रहन सकौं।
जनमत अपमानको अर्को अभ्यास हामी संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा छौं। संविधानको मर्म र यसले परिकल्पना गरेको मूल्यहरुको सम्मान गर्ने अवसर आउन दुई दिन मात्रै बाँकी... बिहीबार, असोज १, २०७७
अख्तियार विरोधको चिरफार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेका भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दछ। भ्रष्टाचार गरेक... बिहीबार, असोज १, २०७७
कोरोना संकटमै यसरी हुन सक्छ महाधिवेशन २०१२ सालबाट कांग्रेसले देखेको बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। १२ औं महाधिवेशनबाट राजतन्त्र छोड्ने निर्णय गर्‍यौं। अधिवेशनबाट कतिपय क... बिहीबार, असोज १, २०७७
पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा थपिए ८५९ संक्रमित शुक्रबार, असोज २, २०७७
२४ घण्टायता थप ८७१ जना संक्रमणमुक्त, ४३ हजार ८२० जना निको भए शुक्रबार, असोज २, २०७७
२४ घण्टामा थप ७ कोरोना संक्रमितको मृत्यु, मृतकको संख्या ३९० पुग्यो शुक्रबार, असोज २, २०७७
२४ घण्टायता थप २०२० जनामा कोरोना संक्रमण, साढे ६१ हजारभन्दा बढी पुगे संक्रमित शुक्रबार, असोज २, २०७७